जर्जहरु पुरैलाइ भुतुक्कै पार्ने‘दले दाइ’ - VON TV
१० माघ २०७६, शुक्रबार १०:३८ 289 ??? ???????
एपिसोड १७ र १८ मा बाहिरिएका प्रतियोगीहरुलाई वाइल्ड कार्ड प्रवेशका लागि पुनः प्रस्तुति दिन लगाइयो । सुमनको पालो १८ औं एपिसोडमा पर्यो । यसअघि उनले टप ९ मा प्रस्तुति दिनका लागि विषय पाएका थिए, ‘जग्गा दलाल’ । तर, टप ९ मा पर्न नसकेपछि उनले त्यो प्रस्तुति दिन पाएनन् । त्यसैलाई वाइल्ड कार्डको प्रतिस्पर्धामा प्रयोग गरे ।
झुम्काको लोकल रेडियो थियो, ‘रामधुनी’ । त्यहाँ एक वर्ष कमेडी कार्यक्रमहरु चलाए । पछि उनलाई टिभीबाट अफर आयो र त्यहीँको लोकल टिभी ‘एलिना’मा काम गरे । एलिना टेलिभिजनमा उनको एउटा चर्चित कमेडी कार्यक्रम थियो, ‘गोलभेडा’ । उक्त कार्यक्रमलाई धेरैले रुचाएका थिए ।